News - Mmezi nke igwe anaghị agba nchara Pipe Ime igwe
Na mmepe nke ụlọ ọrụ, ngwa nke igwe anaghị agba nchara-igwe na-eme igwe na-agbasawanye, ma mmezi nke akụrụngwa ọ bụla dị na ya, na-emetụta ogo nrụpụta, yana ndụ ọrụ nke akụrụngwa. Ezi ndozi nwere ike meziwanye nchekwa na nkwụsi ike, iji hụ na nrụpụta nke ogo dị elu. Ma ọ bụrụ na ị bụghị maara na igwe anaghị agba nchara ji achọ akara tube igwe, nwere ike ọ gaghị enwe ike ịmalite mmezi elu. Mgbe ahụ nke na-esote ga-ewebata ọrụ mmezi na igwe anaghị agba nchara eji achọ igwe njikwa igwe, enwere m olileanya na ọ nwere ike inyere gị aka.
1. The electric nhazi nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ ịgbado ọkụ unit adopts ugboro akakabarede ọsọ ụkpụrụ.
2. The kwụ etiti bụ adiana etiti, ya adiana site turbo-irighiri igbe na coupler, na-eme ka unit ihe adaba iji rụọ ọrụ na ndị ọzọ mụ ike tụgharịa.
3. akpụ igwe na size na-chụpụrụ site na otu moto na kọmpat Ọdịdị. Mmezi dị mfe, ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ.
4. Maka ntọala mgbapụta mmanụ nke igwe ikuku dị n'ime, ọ bụ ezie na e nwere nzacha dị n'ime, ndị ahịa ka kwesịrị ịrụ ọrụ nhicha oge niile iji hụ na mgbapụta mmanụ agaghị ekpuchi. Uzo ikuku nke ikuku oxygen kwesiri ihicha kwa mgbe iji gbochie oke mmanu imechi ya na obere oge.
5. Ogwe osisi na-agbatị usoro ntụgharị anọ nwere ike ịgbanwerịta abụọ, nke nwere ike ọnya n'oge ọrụ nke ngalaba, nke nwere ike belata oge nkwadebe ma mee ka ewepụta ngwa ọrụ na-enweghị agịga agịga.
6. Enwere ike idozi ọnọdụ vetikal ma ọ bụ n'otu n'otu na ntọala ahụ, ọ nwekwara ike idozi ya n'akụkụ.
7. The centerline nke spindle nke mbụ abụọ ịgbado ọkụ griin na Rolling centerline nwere ike gbanwee, na Weld seam na-egbu maramara si abụọ ntụziaka nke staggered direction. Etiti nke ikpeazụ bụ etiti welder, na weld seam bụ kpọmkwem ala na nkuku nke 90 degrees na Rolling centerline, na-eme ka polishing mmetụta ka mma.
8. nkuku kwụ ọtọ bụ ụzọ abụọ site na nyocha nyocha, mgbe ọ dị mkpa iji dochie velvet, mee ka mpempe akwụkwọ mpụta na mpe mpe mpe, mpempe mpempe akwụkwọ ahụ dị warara n'akụkụ abụọ n'otu n'otu, mgbanwe mgbanwe.
The n'elu bụ banyere mmezi ọrụ metụtara igwe anaghị agba nchara ji achọ akara tube igwe, olileanya na ọ pụrụ inyere gị aka.